Ezigbo nduzi maka ulo ọzụzụ - ULLER
Ọ bụrụ n'ịchọtala blọọgụ a na - achọ ịntanetị, ị banyelarị n'uche oke echiche ị zụrụ ahụ gị, ọbụlagodi site n'ụlọ gị, maka ebumnuche ọ bụla. Zụ ahụ anyị dị mkpa maka ahụike na ahụike, yabụ… Ekele diri gị ebe a! Oge a ka anyị tụpụtara iji mepụta ntuziaka ọzụzụ n'ụlọ, mana ọ bụghị naanị ntuziaka ọ bụla, NT guideKWỌ ọzụzụ ụlọ obibi, nke enwere ike iji dị ka ụkpụrụ nduzi na nke mkpali ma ọ bụrụ na ị bụ nwa nwoke, ọ bụrụ na ị bụ nwa agbọghọ, ọ bụrụ na ị nwere otutu ma ọ bụ obere oge n'izu, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọrọ ọzụzụ ike, na ma ọ bụ na-enweghị igwe ... Ihe ntakịrị nke ihe niile! Ihe kachasị mma bụ na, ọ bụrụ na i meela mkpebi iji zụọ onwe gị, ị ga-agụ otu ndu a na otu ịnụ ọkụ n'obi anyị nwere maka imepụta ya maka gị.
Know maara ya, anyị maara ya: Ọzụzụ? Ebube. Ọ dịghị ihe dịka inwe mmetụta nke ahịhịa nke na-agba n'ahụ gị, ọsụsọ na-agbada n'egedege ihu gị, ezigbo ahụ ike ahụ "ọnya" nke ị na-ekwu "ka anyị hụ, ọ ka na-arụ ọrụ", yana nnukwu ikpeazụ: rịba ama mgbanwe na enyo, na-aga n'ihu ma nchebe. Omume a na-eme n'ụlọ anaghị edochi mgbatị ahụ, klaasị na-eduzi ndụ, ma ọ bụ ịme egwuregwu n'èzí, mana ọ bụ eziokwu na ọ bụ ụzọ dị mma ị nwere ike isi gbalịa imezu ebumnuche gị, ọkachasị n'oge Covid.
Nke a apụtaghị na ọ ga-adị mfe, ọfụma. Na ndụ enwere obere ihe, mana eziokwu bụ na ọ ga-ekwe omume ịme njem ahụ n'eziokwu na imega ahụ oge ụfọdụ dị mkpa, yana ọ nwere ike ịdị mfe ma jikwaa ma ọ bụrụ na itinye uche gị na ya. Yabụ, ọ bụrụ na ị dị njikere ịnụ ụtọ egwuregwu egwuregwu na ụlọ, hapụ ka ebum n’uche gị fee, ma chịkwaa ahụ gị, wee gụọ ma chọpụta otu ọ ga-esi bụrụ ihe magburu onwe ya ịzụ ya n’ụlọ anyị yana Nnukwu Nduzi Anyị Maka Ọzụzụ N’ụlọ.
GYN MERE TM TR T N’ HLỌ?
Atọ okwu: arụmọrụ, mma na aku na uba. Ọzụzụ n'ụlọ nwere ike ịbụ nnukwu ihe ọzọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ nsonaazụ dị mma ma họrọ ọ dị mma na ọzụzụ ọzụzụ na nkasi obi nke ụlọ gị, na-enweghị ịkwaga ebe ọzọ, ma ọ bụ tinye obere oge na ego karịa ihe could nwere ike itinye ego na-eme ọzụzụ na-arụ ọrụ n'ụlọ, yana ihe ndị ị nwere, yana ndị ị nwere ike itinye ntakịrị obere dị ka usoro ị na-atụle. Cheta na ị nwere ike ịmalite obere oge, ma mee nke kachasị ya, yana ọbụlagodi ma mepụta ihe.
Ọ bụrụ na ị na-azụ ụlọ, ị nọworị n'ụlọ, ihe ị nwere n'ebe ahụ ga-aba uru maka ọzụzụ ma ọ bụrụ na ịmara otu esi eme ya. Tinye ezinụlọ gị ma ọ bụrụ na ịchọghị ime ya naanị, ma ọ bụ dọọ ha aka na ntị na oge ahụ bụ maka ọzụzụ na ihe ọ bụla ọzọ, yabụ, na-ezere ihe ndọpụ uche niile nke ụlọ ahụ, ị ​​nwere ike ọbụna iche na ị nọ ebe ọzọ, ma zụọ siri ike na-enweghị nsogbu. Obere obere ị nwere ike ịkwalite oghere ọzụzụ gị na obere mgbanwe, nke a ga - eme ihe dị iche ma mee ka ị nwee ahụ iru ala ma lekwasị anya n'ihe ị na - eme. Dika i guzobela oghere di iche iche n'ulo maka ihe di iche iche (kichin iri nri, tebụl iji mụọ / ọrụ), ọzụzụ ga-enwerịrị usoro edozi ma, na mgbakwunye, emezigharịrị obere ihe na ihe ndị bụ isi, na ịnwere ike ịgbakọta na ebukọta na ịdị mfe. Nke a ga - akwali gị ma nyere gị aka itinyekwu obi na itinye uche, yana ịrụ ọrụ ka mma. Ihe kachasị mma bụ na ị ga-ezukọ ma chọọ ya mma n'onwe gị, na oke gị, dịka ịchọrọ! Na-eburu n'uche mgbe niile na, na mgbakwunye na ohere, oge oge dịkwa oke mkpa mgbe anyị na-atụle ọzụzụ site n'ụlọ. Oge ọzụzụ bụ oge ọzụzụ, ma ọ bụrụ na ịrara oge nke ụbọchị gị kpọmkwem na ya na ihe ọ bụla ọzọ, ị nwere ike nweta nnukwu ihe, ma mee ka ụbọchị gị bụrụ ụbọchị ka mma.
Tụkwasị na nke ahụ, usoro mmega ahụ n'ụlọ nwere ike ịbụ nhọrọ dị mma iji gbakwunye na usoro izu gị ma ọ bụrụ na ị na-agakarị mgbatị ahụ, klas ndị na-agafe agafe, yoga, ịkụ ọkpọ, wdg. ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-eme egwuregwu ọ bụla ọzọ. Ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịbịa n’oge n’oge ma ọ bụ ọ bụrụ na nhazi ahụ bụ nanị awa ole na ole n’izu. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime mgbatị ụlọ nwoke ma ọ bụ mgbatị ụlọ nwanyị, ọzụzụ n'ụlọ gị nwere ike bụrụ ihe dị mma maka onye ọ bụla. Ma ọ bụrụ n’uche na nke a bụ ụzọ ị ga - esi mezuo ebumnuche gị, gaa maka ya, n’ihi na ọzụzụ n’ụlọ na - eweta uru na - enweghị ngwụcha.
Kedu uru nke ọzụzụ arụ ọrụ n'ụlọ?
Mee ka mgbatị gị dị na mmega ahụ.
Na-enye nkịtị na obi iru ala.
Ọ na-enye gị mgbanwe awa.
Mpụga okpomọkụ na-emetụta gị obere.
Ọ na - enye gị ohere itinyekwu uche.
Invest na-etinye ego dị mkpa.
Don't naghị echere ndị ọzọ.
Dị ka anyị kwuru, n'agbanyeghị ma ị bụ nwoke ma ọ bụ nwa agbọghọ, ị na-eme ọzụzụ na-arụ ọrụ n'ụlọ ị ga-enweta uru niile dị na mmega ahụ: meziwanye ọnọdụ nke ọkpụkpụ azụ, belata ihe mgbu, ike ụbọchị niile, ụda ma kpụzie ya akwara, belata ihe, ị na-emewanye mgbanwe, ị na-emepụta endorphins, ị na-emewanye ọdịmma, ị na-ebelata nchekasị, ị na-emezi usoro obi gị, n'etiti ọtụtụ uru ndị ọzọ metụtara ya. Yabụ, ma ị na-achọ ime mgbatị ụlọ maka ụmụ nwoke, ma ọ bụ mgbatị ahụ ụlọ maka ụmụ nwanyị, uru ga-apụta ìhè ozugbo ị nwere ike ịbanye n'ime usoro kwesịrị ekwesị maka ahụ gị na ikike gị.
RỌRỌ RLỌ N'ATLỌ
Omumu ihe omumu nke ulo abughi ihe obula bu nkenke nkuzi nke di nkenke nke i puru isoro nke oma na nkasi obi nke ulo gi, ka ewepu oge na ego gi, ma nwekwaa ogwugwu na ubochi gi, ma obu site n'iji ibu nke gi na nke gi. site n'ụlọ dị ka ihe nkwado maka mmega ahụ, ma ọ bụ iji akụrụngwa mgbatị nke ị na-eji nwayọọ nwayọọ tinye dị ka ihe nkwado.
N'ụlọ anyị nwere ike ịme ọtụtụ ụdị ọrụ dị iche iche, na-adabere kpọmkwem na ihe anyị nwere n'aka anyị, dịka ọmụmaatụ, usoro ọzụzụ n'ụlọ na akụrụngwa mgbatị ma ọ bụ na-enweghị akụrụngwa. Nwekwara ike ịme ihe na-eme ma ọ bụ na-enweghị ibu na, ọ bụ ezie na ha dị iche, ha abụọ nwere uru ha na uru bara uru na ahụike na ahụike gị. Maka nke a, ọ dị mkpa ka ị mee tebụl mmega ahụ nke na-eje ozi dị ka onye ndu na nhazi ị ga-agbaso; Karịsịa, ọ bụ ihe gbasara nhazi iji zere ịdị na-emegharị na mgbatị gị ma zere ịme obere ma ọ bụ obere usoro dị mkpirikpi karịa ka ị mere atụmatụ ime.
Kedu otu esi eme bọọdụ ọzụzụ n'ụlọ?
Ime tebụl ọzụzụ n'ụlọ gụnyere ịhazi usoro ihe omume nke ga-eme mmega ahụ gị n'ụlọ, na-eme atụmatụ ugboro ugboro nke ị ga-eme nke ọ bụla na calorie ndị ị ga-eji ọkụ gbaa na nke ọ bụla, yana oge nke usoro zuru ezu ga - ewe, gụnyere mgbatị mgbatị na mgbatị ahụ. Ya mere, mgbe ị na-eme tebụl ọzụzụ gị n'ụlọ, chee echiche banyere itinye ihe ndị a:
Bọchị (ụbọchị / izu / ọnwa)
Oge nke ụbọchị (ụtụtụ / ehihie / abalị)
Oge (gụnyere mgbatị na mgbatị ahụ)
Chee ugboro ole kwa ọnwa, izu na otu ụbọchị ị nwere ike ịrara ọzụzụ na ụlọ. Mgbe ụfọdụ a na-eme ụdị ọzụzụ a ka ọ bụrụ na ị na-emega ahụ ebe ndị ọzọ dị ka o kwesịrị, mana, ọ bụrụ na ọ bụ naanị ihe ị na-eme n'oge a, wepụta ya nke ọma ka ọ ghara imetụta ndị ọzọ ndị gị na ha na-emekọ ihe. -n bi, ma ọ bụ dabara na mmemme ndị ọzọ ị na-eme n'ụbọchị gị kwa ụbọchị. I kwesiri iche echiche banyere oge ọ kacha mma ka ị mee ya: ihe dị mma banyere nke a bụ na a ga-enwe ụbọchị mgbe ọ ka mma ịme ya n'ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie, na ndị ọzọ nwere ike n'abalị . Ihe dị mkpa bụ na, ọ bụrụ na i guzobe usoro ihe omume maka oge ọ bụla nke ụbọchị ị nwere ike itinye n'ọrụ, mgbe ahụ na njedebe nke ụbọchị ị ga-enwe ekele maka ịme obere. Nwee ngwa ọrụ niile dị mkpa. N'ezie, ị nwere ike ịme ụdị "mise en ebe", nke bụ okwu gastronomic nke enyere na nka ịhazi ihe niile na ihe ịchọrọ iji sie nri. Na nke a, ọ dị otu ihe, yabụ na ị gaghị egbochi ọzụzụ a na-achọ ibu, mmiri, ekwentị mkpanaaka ... mana ị ga-enwe ihe niile dị nso iji mezuo oge gị, ugboro ugboro na oge n'ụzọ ziri ezi.
Kedu ihe m kwesịrị ịzụ n’ụlọ?
Maka ụdị ọzụzụ niile anyị kwesịrị ịnwe nkwado nkwado na aka, ya bụ, ihe ga - enyere anyị aka ime ọzụzụ anyị n'ụzọ ziri ezi. Nke mbụ, ịkwesịrị ịkọwa ma ị ga-arụ ike ọzụzụ na oke ma ọ bụ na ọ bụghị ibu, maọbụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ihe gbasara cardio na saịtị iji nyere aka meziwanye usoro obi gị ma nyere aka kpoo ahụ gị ọkụ iji gbakwunye calorie ọzọ maka ụbọchị ahụ .
Ọzụzụ ike na ụlọ (yana ma na-enweghị igwe)
Ọ bụrụ na ị ga-eme ike ọzụzụ na igwe, ị ga-achọ ibu iji bulie. Nke a nwere ike ịbụ akụrụngwa mgbatị ma ọ bụ ihe ị nwere ike ịchọta n'ụlọ nke dị arọ, dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ, nnukwu karama mmiri, ma ọ bụ mgbatị mgbatị, ọ bụrụ na ị nwere ha, dịka ọmụmaatụ, vinyl ma ọ bụ roba iji zere ihe ọghọm yana ha nwekwara njide ka mma mgbe ị na-eji ha.
Ọ bụrụ na ị naghị achọ ịme ọzụzụ dị arọ n'ụlọ kama ọzụzụ na-eguzogide, ị nwere ike ịhọrọ ịzụta mgbatị ahụ na-arụ ọrụ na nha na ogo dị iche iche, iji nyere aka wulite ahụ na-enweghị mkpa iburu ibu ọzọ. N'ezie, nke a bụ ụzọ dị mma iji mee ka ahụ gị dị ike site na iji ibu nke gị yana ịgbakwunye nguzogide ọzọ iji nyere aka mee ka akwara gị dị ike.
Cheta na iwusi ahụ ike n'oge mmega ahụ na-enyere aka ịmekwu calorie, abụba na glucose, nke nwere njikọ chiri anya na ịbelata ibu ma belata nha ma ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịnweta ahụ dị egwu.
Kedu ihe kacha mma iji zụọ n'ụlọ?
Kachasị mma maka ọzụzụ n'ụlọ bụ nke na-enyere gị aka n'ezie dị ka nkwado iji mezuo ebumnuche gị. Ya mere, ozugbo ị chịkọtara okpokoro ọzụzụ gị n'ụlọ ma nwee foto na nhazi oge niile, mgbe ahụ ị nwere ike ịkwado ihe ndị a ga-eji na-azụ n'ụlọ. Ya mere, ị ga-enwe ike ịhụ n'ụlọ nke bụ oche kacha mma, mgbidi, na oke ụlọ nke ọdịnala nwere ike ịba uru gị, ma ọ bụ na ị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ego na ndị na-agbanwe agbanwe iji zụọ n'ụlọ, ma ọ bụ ụkwụ jupụtara na aja ibu, ma ọ bụ ọbụna ibu nke vinyl ma ọ bụ roba, nke na-adịkarịghị ọnụ.
Typedị nkwado ọzọ, nke na-abụghị ibu ma ọ bụ na-egosi mmegide, bụ, dịka ọmụmaatụ, mgbochi yoga, ogwe osisi, ma ọ bụ bọọlụ yoga, nke nwekwara ike ịba uru dị ukwuu maka ịme mmemme dịgasị iche n'otu ebe ahụ. Na, ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma na onye n'ezinaụlọ gị afọ gara aga zụtara igwe ịgba ọsọ ma ọ bụ elliptical na mythical "oku ugbu a" infomercial ma na-achịkọta ntụ n'uko elu ... kpochapu ya ma were ya!
Typesdị nkwado ndị ọzọ:
Na mgbakwunye na ihe ọzụzụ, a na-atụ aro ka ị gbakwunye ụfọdụ ụdị nyocha ma ọ bụ nkwado anya nke na-eme ka usoro gị bụrụ ihe na-atọ ụtọ karị, dịka ọmụmaatụ, listi ọkpụkpọ egwu, pọdkastị nke mmasị gị, ma ọ bụ vidiyo na YouTube, ọkachasị ọ bụrụ bụ usoro ndu, klaasị ma ọ bụ usoro ị ga - agbaso n'ụlọ. Ọzọ ọzọ nhọrọ bụ ibudata a ọzụzụ ngwa gị mobile ma ọ bụ mbadamba. Ekele maka ngwa ọzụzụ, dị ka "Ike", "Nike Training Club", "MyFitnesPal" ma ọ bụ ihe yiri ya, ịnwere ike ịhazi akụrụngwa bara uru dị ka mkpuchi amamịghe, elekere nkwụsị, nri na usoro ọzụzụ ị ga - agbaso, ka ị nwee ike ime nke kachasị ọzụzụ enwere ike n'ụlọ. Ọ dịkwa mkpa na mgbe ị na-azụ ọzụzụ, ọ dị gị mma, ma kwụsi ike mgbe ị na-eme njem ọ bụla, yabụ cheta na ọ dị mkpa ịnweta uwe na akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ekwesị iji mee usoro gị.
TLỌ OMLỌ WITHLỌ NA ATA
Ọ bụrụ na ịmee atụmatụ ọzụzụ ụlọ dị gị mma, mgbe ahụ ọ pụtara na ị kpebiri ịme mgbatị mgbatị ụlọ ma ọ bụ nweta ihe ọzọ dị arọ iji nyere gị aka imega ahụ. Cheta na, na nke a, ihe eji emegharị maka mmega ahụ ka mma mgbe niile, agbanyeghị, ọ nweghị ihe ga - eme ma ọ bụrụ na iji karama mmiri, igbe, wdg edozi ọnọdụ ahụ. Ihe ọ bụla ị kpebiri, cheta ịnwe ha tupu ịmalite na ... ka anyị zụọ!
Ọzụzụ n'ụlọ na-ebu ibu
N’onwe ya, “Cross Fit”, na mgbakwunye ịbụ ụghalaahịa edenyere aha, bụkwa ọzụzụ ọzụzụ kachasị mma nke ndị agha nchekwa (ọkụ, ndị uwe ojii na ndị agha). Ọ bụ usoro ọzụzụ dabere na ịme mmegharị oge niile dịgasị iche iche, itinye mmegharị arụmọrụ, ma na-eme ha n'ụzọ siri ike. N'ihi ya, ọ bụ ụzọ dị irè iji mee ka ahụ dị gị mma ma felata ngwa ngwa, n'ihi na ọ na-atụ aro mmefu caloric dị mkpa kwa oge n'ihi na ọ bụ ọzụzụ nke ezumike anaghị adịkarị. A na-eme nke a n'ime igbe, ma jiri obere akụrụngwa, gụnyere ụdọ, ogwe osisi, na igwe. Ya mere, ime ya n'ụlọ dị oke mma, mana ọ bụghị otu ihe ahụ na oghere emegharị maka ọzụzụ. Otú ọ dị, ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ ihe n'ụlọ, dị ka ibu, ohere zuru oke na Ogwe, ị nwere ike ikpuchi ụkpụrụ ndị bụ isi nke usoro ọzụzụ a, ọbụlagodi ịmegharị mmegharị site na ịgbakwunye ibu na nkwonkwo ụkwụ gị.
Anyị na-agwa gị 5 usoro ọzụzụ ọzụzụ maka ụlọ na igweIhe ị nwere ike ime ma ọ bụrụ na ịnweghị igbe ọzụzụ dị:
1. Murph WOD n'ụlọ. Mee oge kacha mma:
Mkpụrụ Jacking (400)
Sere-Ups (100) iji tebụl, ọnụ ụzọ ma ọ bụ mmanya.
Ihe Ntugharị (200)
Ndị ụgbọelu (300)
2. WOD KALSU n’ụlọ. Mee na obere oge enwere ike:
+ 5 nkeji ọ bụla ewebata XNUMX Thrusters na ibu / dumbbell ma ọ bụ ihe dị arọ.
3. WOD - AMRAP 15-50. Mee ọtụtụ nnọkọ dị ka o kwere mee.
Aka Hapụ Push-Ups (15)
Ugboro abụọ (50)
Ugbo elu na-eji ibu / dumbbell ma ọ bụ ihe dị arọ (15)
4. AMRAP n’ụlọ. Dị ka ọtụtụ nnọkọ dị ka o kwere mee.
Isiokwu Isiokwu (10)
Lunges (15) Jiri ibu / dumbbell ma ọ bụ ihe dị arọ n’aka nke ọ bụla.
5. Maka oge usoro: 8 - 25 - 50 - 75 - 50 - 25 - 8. Emecha n'oge kachasị dị mkpirikpi. Tinye ibu ma ọ bụrụ na-ịchọrọ.
-Kwụ ụkwụ otu ụkwụ (8) (alt)
Akpa n'elu ubu (25)
Ududo Push-gbasie (50)
Isiokwu / Door Sere-Ups (75)
Nanị otu ụkwụ (8)
Iji zuo ezu n'oge ụbọchị ndị ọzọ n'izu ma ọ bụrụ na ịchọghị ịme ihe omume kwa ụbọchị, ịnwere ike ịme ọzụzụ dị arọ n'ụlọ, ya bụ, jiri obere vinyl na aka ma ọ bụ nwee nkwonkwo ụkwụ ma ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, ịwụ elu, ịgba ọsọ na ọnọdụ (na ebe ahụ), ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-ejegharị n'ụlọ gị. Nke a ga - enyere gị aka nke ukwuu n'ihi na ọ bụ ụzọ ọzọ magburu onwe ya iji wee zụọ ụkwụ nwere ibu igwe n'ụlọ, yana kwa ọzụzụ azụ na oke, n'ihi na iburu ibu na isi okwu abụọ a (aka na nkwonkwo ụkwụ) ị ga - enyere ndị ọzọ aka mkpịsị ụkwụ na - akpata - gụnyere azụ na apata ụkwụ (n'otu n'otu) - were ụfọdụ ibu a ma gbasie ike n'ụzọ. N'ezie, ịme mgbatị ahụ dị ka aerobics ma ọ bụ usoro ịgba egwu dị egwu karị ma ọ bụrụ na anyị emee ha na-ejide ihe dị arọ, dịka ọmụmaatụ, karama mmiri abụọ ma ọ bụ obere akpa aja nke e kere na nkwonkwo ụkwụ anyị.
ỌR AT ATLỌ N'WITHLỌ N'EZI IHE NA-EME IHE
Na-enweghị igwe? Nsogbu adịghị! Ọ bụrụ na ị tụlere ịme ọzụzụ ọzụzụ n'ụlọ na-enweghị ibu mgbe ahụ ị ga-enwe ike iwusi ahụ gị ike na oke nke gị, nke bụ ụzọ magburu onwe ya iji mepụta ahụ gị ma nyere aka wulie ike.
Ihe omumu a na-enweghi ibu bu nkuzi nke ulo n'ulo, nke puru igodo iji mezi sistemu obi anyi na ichikota abụba iji mee ka ha di nma. Nke a nwere ike na-agba ọsọ na ọnọdụ, ma ọ bụ na-eme omume dị ka jacks na-awụlikwa elu, ma ọ bụ ịwụli eriri.
Na nke a, ị nwere ike itinye mgbatị mgbatị n'ụlọ (nke siri ike) nke ị nwere ike jiri nwayọọ nwayọọ na-abawanye ma na-agbadata ike na ọsọ ọsọ karịa oge iji gbaa calorie ndị ọzọ ume ma nwee elu ngwangwa nke obi.
Dịka ọmụmaatụ, mee nnọkọ "20 - 40" kwa nkeji, ya bụ, 40 sekọnd na-ejigide usoro nkwụsi ike ọsịsọ ọsịsọ na sekọnd 20 fọdụrụnụ na-eme ngwangwa ka ị nwere ike; Enwere ike imeghachi ihe a oge niile ị na - azụ cardio. Formsdị cardio ndị ọzọ n'ụlọ na-enweghị ibu gụnyere igwe, ma ọ bụrụ na ịnwee ha ka ha jiri ha.
Ọzụzụ Crossfit n'ụlọ na-enweghị ibu arọ
Dị ka anyị kwurula na mbụ, crossfit bụ otu n'ime nhọrọ ọzụzụ kachasị achọ, mana ọ bụkwa otu kachasị dị irè. Na mbụ anyị nwere ike ịhọrọ usoro ọzụzụ dị arọ nke ị nwere ike ime n'ụlọ, mana ọ bụrụ na ịnweghị oke (ma ọ bụ ndị nọchiri ya) ma ọ bụ ụlọ mmanya ị nwere ike iji, ị nwere ike ịgbaso usoro emegharịrị. Agbanyeghị, ị ga-aghọtarịrị na ụlọ gị abụghị igbe ọzụzụ, yabụ, ị gaghị achịkwa mmegharị niile. Crossfit kwesiri ka mmanya ma ọ dịkarịa ala na ibu, ụdọ, wdg. a ga-ewere dị ka ndị dị otú ahụ. Mana, ọ bụrụ n’inweghị n’ụlọ, ịnwere ike iji ike gị mee ihe kachasị mma n’inwe, ọbụlagodi na ọ bụghị dochie anya 100%.
Nwere ike ịgbaso usoro omume nke anyị kọwara n'elu na-agbakwunyeghị ibu ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-eme dị iche iche ọzụzụ, anyị na-etinye ọnụ a crossfit ọzụzụ ọzụzụ n'ụlọ Na-enweghị ihe onwunwe ka e wee gbaa gị onwe gị ume ịnwale ụdị ọzụzụ a na nkasi obi nke ụlọ gị. Mee nzaghachi kachasị na n'oge dị mkpirikpi nke mmemme ndị a:
Burpees (jikọta push na elu jumps)
Nọdụ ala (abs)
Isometrics (ikpere aka)
Push-Ups (nnuli elu)
Triceps dips (oche oche nke aka na aka)
Sere-Ups (ọ bụrụ na ịnwere mmanya n'ụlọ)
Fọdụ ngwa ngwa ọzụzụ ga-enyere gị aka ịkwali onwe gị ma duzie gị mgbe ị na-eme usoro gị. N'ime ndị kasị mma anyị na-egosipụta Woodbook na Wodrec. Younu anwalela ha?
Ọzụzụ ịkụ ọkpọ na-enweghị igwe
Nhọrọ ọzọ magburu onwe ya maka mgbatị n'ụlọ bụ ịrụ ọrụ ịkụ ọkpọ dị mfe n'ụlọ ma ọ bụ ịkụ ọkpọ, nke ga-enyekwara gị aka iwusi azụ gị ike ma, ya mere, bụ mgbatị ahụ magburu onwe ya n'ụlọ, ọbụlagodi na-enweghị ibu arọ. Fitboxing bụ nnukwu mmega ahụ ị ga-eme n'ụlọ, na mgbakwunye na usoro ịgba egwu agba egwu na usoro aerobic nke a na-ahụkarị maka ịdalata ma meziwanye usoro obi.
N'okwu a, ị nwere ike ịme ihe ọkpọ na ịgba egwu na-enweghị ọtụtụ akụrụngwa, mana ọ bụrụ na ịchọrọ isonye usoro ịkụ ọkpọ n'ụlọ, ị nwere ike obere obere itinye ego na akụrụngwa, ọkachasị aka na-agbanwe aka iji kpuchie nkwojiaka na nkwonkwo ụkwụ, ọbụlagodi akpa ọkpọ o buru na ichoro I tinye ya onu. Cheta na ngagharị enweghị ike ịbụ onye nzuzu na onye a na-achịkwaghị achịkwa, egwuregwu a nwere usoro o guzobere, yabụ, ọ kachasị mma ịgbaso usoro ntụzịaka na ngwa ndị ọkachamara dịka "Boxtastics" ma ọ bụ "Shadowboxing", ma ọ bụ chọọ nduzi ndị bụ isi na YouTube ịme ọkpọ. mgbatị n'ụlọ.
Nri TZỌ N'ATLỌ
Cheta na iri nri na ịkwa mmiri nke ọma bụ sine qua enweghị ọnọdụ na ọzụzụ ọ bụla, ma ọ bụ n'ụlọ.
Ya mere, mgbe ị na-eme atụmatụ ọzụzụ n'ụlọ gị, ịkwesịrị ịhazi nri gị ka ị wee zụọ ahụ gị n'oge kwesịrị ekwesị, tupu, n'oge na mgbe emechara ahụ, na-enweghị mmekpa ahụ mmega ahụ gị ma ọ bụ esemokwu.
Dị ka nri, mmiri dị mkpa, mana n'ogologo, ọ gaghị adaba iwefere ya.
Nwere ike ịgụnye na tebụl ọzụzụ gị n'ụlọ awa nke mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, iri nri na ịnwe nri ị ga-eri n'oge, yana edozi, ka ị ghara ịhapụ iri nri ma ọ bụ zụọ azụ mgbe awa gachara, ma ọ bụ na afo efu ma ọ bụrụ na ịnọghị eji ya.
ND TIMỌDPS NDPSMỌD FOR IHE N'TL H OMLỌ
Wepụ ihe ndị nwere ike ịdọpụ gị uche. Anyị maara na n'ụlọ anyị na-arụ ọrụ ndị ọzọ yana na a ga-enwe ibu ọrụ mgbe niile imezu. Otú ọ dị, a na-atụ aro ka ị lekwasị anya na mmega ahụ n'oge ịtọpụtara maka ya. Mgbe ahụ i nwere ike ilekọta ihe ndị ọzọ.
Hazie usoro ihe omume gị. Ọ bụ ezie na usoro ị na-eme n'ụlọ nwere ike ịbụ ihe a na-atụghị anya ya (ka ị ghara ịkwụsị ọzụzụ ma ọ bụrụ na ụbọchị ahụ ị nweghị ike ịga mmemme gị), ọ bụrụ na ị tụmadị ịmega ahụ n'ụlọ, mgbe ahụ anyị na-akwado ịhazi na ịhazi usoro gị, na ịhapụ ụfọdụ ohere n'ụbọchị gị maka ya. Ọzọkwa, debe kalenda gị ka ha ghara itinye aka na nzukọ, nnọkọ ma ọ bụ nkwa na, ọ bụrụ na ọ ga-adị, dozie usoro gị n'ụzọ kacha mma, ọ nweghị ihe mere ma ọ bụrụ na ị zụghị otu ụbọchị, kedu nke ọzọ , gụọ ya dị ka ahụ ike ụbọchị gị izu ike, nke dị mkpa mgbe niile iburu n'uche na ụdị ọzụzụ ọzụzụ niile.
Mepụta usoro nkwado. Rịọ n'ụlọ ka ịkwado gị na usoro ị na-eme, ma ịme ya ma ọ bụ ịkwanyere oge ị na-etinye na ya.
Họrọ oghere ma mee ka ọ bụrụ ebe ọdịmma gị. Were ohere n’ụlọ gị, ihe ọ bụla i nwere ike, ihe ọ bụla i nwere, ma jiri ya mee mgbatị gị. Nwere ike gbanwee ya n'oge dị gị mma, mana ịnwe oghere ị raara nye ya ga-enyere gị aka itinye uche gị.
Hazie ihe ị chọrọ. Chee ụdị ọzụzụ ịchọrọ maọbụ nke ị ga-eme n'ụlọ ma hazie ihe ịchọrọ, dịka ọmụmaatụ, kwụọ ụgwọ ekwentị gị, mee playlist, chọta klas n'ịntanetị, budata ngwa ahụ, dozie karama mmiri gị ma ọ bụ smoothie protein, wdg.
Chee usoro na arụmọrụ. Chọọ amaokwu, usoro ihe omume ma hụ ihe ga-akacha baara gị uru. Ọ bụrụ na ị ga-emegharị mmegharị omume na mmejọ, mee ha ka ị nwee ike ịghọta ụda na ike nke kachasị gị mma na mgbe ahụ, nwayọ, ị ga - emeziwanye ma rụọ ọrụ nke ọma.
Echefula inye mmiri ma rie nke ọma. Mee ya n'oge, yana nri siri ike, juputara na protein na carbohydrates dị mgbagwoju anya, na-ezere abụba na oke shuga.
Gbanwee usoro ị na-eme maka ọfụma ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-echeta na mmụba na-aga n'ihu bụ isi ihe ga-eme ka ị nwee ọganiihu ogologo oge.
Gee ntị n'ahụ gị ma cheta idebe ụbọchị izu ike.
Mara mbọ ị na-agba ma kwụghachi onwe gị ụgwọ! Gị na ndị enyi ịpụ apụ, jiri akwa ọhụrụ, ma ọ bụ ọbụlagodi iri nri dị ụtọ. Ma, ee, n’echi ya ọ laghachiri ọzụzụ!
Ugbu a ị nwere echiche ka mma banyere otu esi azụ ụlọ na elele nke ịme ọzụzụ na ụlọ, ka anyị mara ka ọ si aga!
Aymar Navarro bụ nke atọ na njedebe ikpeazụ nke Freeride World Tour na Verbier
Onye na-agba Aranese Aymar Navarro guzo n’elu ikpo okwu nke Grand Final nke Freeride World Tour 2021 nke nwere nchara ọla n’aka ya. Na mgbakwunye na ịbụ okpueze nke atọ na asọmpi kachasị
5 onyinye zuru oke maka ụbọchị nna
Chee echiche ọzọ! Zụrụ papa na ngwa egwuregwu ọ na-agụ agụụ. Na Uller® anyị na-enye gị nhọrọ nhọrọ 5 ndị ​​a maka ụbọchị Nna, nke ga-abụ ọkacha mmasị gị ogologo oge